Ofisialy io: ny Xiaomi Mi Max 3 Pro dia tsy halefa | Androidsis
Xiaomi dia manamafy fa tsy hisy Xiaomi Mi Max 3 Pro
Eder Ferreño | | About us, Xiaomi
Andro vitsy lasa izay dia nisy ny tsaho nilaza izany Xiaomi dia handefa ny Xiaomi Mi Max 3 Pro fotoana fohy. Nahagaga ity modely ity tao amin'ny tranonkalan'ny Qualcomm, ary novinavinaina fa hitovy amin'ilay Mi Max 3 natolotra vao haingana izy io, na dia misy famaritana kely aza. Anisan'ireo fahasamihafana ireo ny processeur, izay mety ho Snapdragon 710.
Nanaitra ny maro ity famoahana ity, satria tsy nisy fantatra momba an'ity Xiaomi Mi Max 3 Pro ity Mandrak'izao. Izany dia nahatonga ny maro hanontany tena ny amin'ny fisian'ilay fitaovana. Farany, ny marika mihitsy no manome hazavana.
Tato anatin'ny andro vitsy lasa izay, ny fahanginan'ny marika Sinoa dia gaga tamin'io lafiny io. Saingy, niteny ihany izy ireo tamin'ny farany. Azo hamafisina izao, satria ny orinasa mihitsy no nilaza izany, fa ny Xiaomi Mi Max 3 Pro dia tsy hahatratra ny tsena. Ny marika dia hifantoka amin'ny Mi Max 3 fotsiny eo amin'io sehatra io.
Ny mahagaga, na mamela fisalasalana momba izany, dia ny filazan'ny orinasa fa tsy halefa ilay fitaovana. Saingy mbola tsy nisy fanamafisana mazava nilaza fa tsy misy ny Xiaomi Mi Max 3 Pro. Saingy, tsy miditra amin'ity, efa fantatsika fa tsy hahatratra ny magazay ny telefaona.
Noho izany, ny Xiaomi Mi Max 3 izay vao nampidirina dia ho fitaovana tokana izany dia eo amin'ity faritra ity. Zavatra mahazatra ao, izay hihaonantsika telefaona vaovao isan-taona. Ankehitriny, tsy maintsy miandry ny telefaona vao manomboka mahatratra tsena vaovao isika.
Tsy maintsy ho hitantsika ny fomba amarotan'ity Xiaomi Mi Max 3 iraisam-pirenena ity. Izy io dia karazana telefaona izay tsy misongadina indrindra amin'ny famaritana azy, fa fantatra amin'ny haben'ny efijery malalany. Ho hitantsika raha maharesy mpampiasa maro ity taranaka ity. Miala tsiny ve ianao fa tsy misy Mi Max 3 Pro?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia manamafy fa tsy hisy Xiaomi Mi Max 3 Pro
Android P Beta 4: Eto ny pratika Android P farany
Ny Ulefone Armor 5, finday matanjaka miaraka amin'ny notch, dia nambara tamin'ny fomba ofisialy